Chipo Mabhokisi, Notebook, Tattoo Stickers - Yuxingyuan
Kuda kushanda newekugadzira ramangwana riri nani.
Shenzhen Yuxingyuan Chipo Packaging Co, Ltd. inyanzvi yekudhinda uye kupakata bhizinesi rekubatanidza dhizaini, kudhinda uye post-kugadzirisa. Nyanzvi yekudhinda ese emhando yemabhokisi ekupakira, mabhokisi emavara, mabhokisi emakadhi, makadhi emavara, kushambadza maalbum, ma tag, zvinyorwa, mabhegi emapepa, zvitambi, notepadhi, zvitupa zvekutema, maalbamu emifananidzo, mabhokisi ezvishongo, mabhokisi ezvitoro…
Kupa vatengi nemhando yepamusoro yekudhinda uye kurongedza zvigadzirwa nemasevhisi.
Special bepa noodles pamwe bowknot nemasango pa ...
Chakapusa chipo bhokisi iro basa rezvipo mabhokisi Anonakidza, akasarudzika chitarisiko icho chinogona kuputira zvinhu, iyo ...
zvakagadziriswa zvinyorwa, zvakagadzirwa zvakanaka ...
Ruva tattoo zvidhori Aesthetic nyora zvidhori zvinokupa iwe runako rudiki muhupenyu hwako hwakajairika. ...
Yechirimo bepa remudzidzi notibhuku Sarudza bepa remudzidzi mabhuku ekunyorera: Kutanga, mhando yepape ...
Iri bhuku rekumusoro-soro rebhizimusi rine rakakura-kumagumo chitarisiko uye chakaderera-kiyi chitarisiko pasina kurasikirwa ...
Iyo kambani inogara ichitora kuvandudzwa kweepamusoro-tekinoroji yazvino yekudhinda bhizinesi sekusimudzira kwayo gwara, inoramba ichienderana nenguva, uye inoramba ichingoenderana neyazvino yekudhinda indasitiri ruzivo uye maitiro.
Tine yemhando yekudhinda michina uye hunyanzvi hwehunyanzvi danho.
Chimiro chechigadzirwa chakapfuma, zvirokwazvo chinogona kugutsa kuda kwako.
Kana uchida, isu tine nyanzvi yehunyanzvi yekubatanidza newe.
Ko vanhu vakanyorwa nyora vanosarudza zvidhori zvetato is Munhu wese anoziva nezwi rekuti tattoo, handiti? Mazuva ano, mumaziso evanhu vazhinji, chero munhu ane tattoo pamuviri wake anozotorwa semunhu anoshamwaridzana. Vanhu vazhinji ...
Ndeipi nhungamiro nyowani yekuvandudza zvigadzirwa?
Ndeipi nhungamiro nyowani yekuvandudza zvigadzirwa? Mumakore achangopfuura, pamwe nekuvandudzwa kwehupenyu hwevanhu, kudiwa kwevatengi kwezvigadzirwa zvezvinyorwa kwakawedzera, izvo zvakasimudzirawo vanotengesa mabhuku ku ...
Shumira vese vatengi zvakanyatsoteerera.
Kubvira payakagadzwa, kambani iyi yanga ichiomerera kune bhizinesi uzivi hwe "hunyanzvi, kugona, mhando, basa".